Push nhasi pane zvauri kuda mangwana. - Lorii Myers - Quotes Pedia
Sundidzira nhasi pane zvaunoda mangwana. - Lorii Myers
Kunyangwe hupenyu husingafungirwe zviripo zvakakosha kuti tigadzirire ramangwana. Tese zvedu tine zvimwe zvido uye zvinangwa zvatiri kuda kuzadzisa muhupenyu. Kuti zviroto izvi zviitike, zvakakosha kuti isu tironge. Iko hakuna nguva chaiyo kana nzvimbo yakakodzera yekutanga kuigadzirira.
Gara uchiyeuka kuti kushanda nesimba uye kungwara zvinongokufambisa iwe. Zvakakosha kuronga zviitwa zvako kuti ugokwanisa kuwana zvaunoda uye kugutsikana muhupenyu. Pachave nezvipingamupinyi uye kunyange shanduko kune maitiro aungave waronga rwendo rwako. Asi zvakakosha kuti iwe ugare wakagadzirira kurarama nematambudziko zvakare.
Iwe unofanirwa kusangana nehupenyu sezvo ichiswedera kwauri, asi zvakakosha kuti ugare wakaumbirwa mumamiriro akadaro. Iwe unofanirwa kutsvaga imwe nzira kuitira kuti ugone kurarama neshanduko uye wozowana zvaunoda mune ramangwana.
Iwe unogona zvakare kunzwa kuti izvo zvawakange waronga pachako pachako hazvisi kukufadza futi. Iva neshuwa newe. Kana uchiri kunzwa kuti wawana chishuwo chitsva chaunoda kutevedzera saka unofanirwa kuchironga maererano nazvo.
Ramba uchishanda nesimba uye upe zvakanakira iwe kusvikira iwe uchifunga kuti waguta. Hazvisi zvese zvaunoda zvichauya zviri nyore, saka iwe unofanirwa kuzvimanikidza nazvo. Haufanire kukanda mapfumo pasi. Iwe uchada rutsigiro asi rangarira anesimba akasimba aunawo iwewe ndiwe.
Hapana munhu achakumiririra nenzira yaunoda. Saka usamborega kuzvivimba pachako uye kufambira mberi. Iva akajeka pane zvaunoda uye kurwira icho. Kana iwe uchida kuona chero shanduko munharaunda itange iyo pachako. Usamiririre kuti chero ani asimbise pfungwa yako kana iwe uchifunga kuti inobereka michero. Kana iwe ukaita chinhu chakanaka, iwe uchaona maitiro ayo munguva pfupi inotevera.
Kwezuva Nezuva Kukurudzira Quotes
Yakanaka Positive Quotes Nhasi
Motivational Quotes ZveNhasi
Ipfupi Inokurudzira Quotes
Short Budiriro Quotes